ကျွဲ၊ နွား၊ သိုး၊ ဆိတ် အစရှိသည့် သတ္တဝါ အစာကျွေးနည်းစနစ်သစ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်မည်
Post byစိုးချစ်ချစ်ပိုင်(AMIA) on Saturday, May 04,2019
ဆွေးနွေးပွဲများကို ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးတွင် ပြုလုပ်ကြမည် ဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံ- မှိုင်းဝေ(AMIA)
ကျွဲ၊ နွား၊ သိုး၊ ဆိတ် အစရှိသည့် စားမြုံ့ပြန်သတ္တဝါမွေးမြူရေး၌ နိုင်ငံတကာတွင် တွယ်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနေ ပြီဖြစ်သည့် Fermented Total Mixed Ration ကျွေးမွေးခြင်းနည်းစနစ်နှင့် ပတ်သက်သည့် အလုပ်ရုံဆွေး နွေးပွဲများကို ရန်ကုန်မြို့နှင့် မန္တလေးမြို့များတွင် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ချုပ်မှ သိရသည်။
စားမြုံ့ပြန် သတ္တဝါများ မွေးမြူရာတွင် တိရစ္ဆာန်၏ အသက်အရွယ်နှင့် ထုတ်လုပ်မှုအလိုက် လိုအပ်သည့် အာ ဟာရဓာတ်များကို တွက်ချက်ကာ ယင်းလိုအပ်ချက်ကို ပြည့်မီစေမည့် အစာဖော်မြူလာကို တွက်ထုတ်ပြီး အ စာနု၊ အစာကြမ်း အစာအမယ် အားလုံးကို ရောမွှေကာ ထုတ်လုပ်ထားသည့် အစာကို Total Mixed Ration ဟု ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ မွေးမြူရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဦးစီးဌာန၊ ထိုင်းနိုင်ငံ တိရစ္ဆာန် အာဟာရဗေဒ ပညာရှင်များအဖွဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံ နို့လုပ်ငန်းအသင်း တို့နှင့် ပူးပေါင်းကာ အဆိုပါ အလုပ် ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှ အသေးစား နွားမွေးမြူသူများအနေဖြင့် လွန်ခဲ့သည့် ၅ နှစ်မှ စတင်ကာ Total Mixed Ration (TMR) ကို အသုံးပြုခဲ့ကြပြီး မွေးမြူသူများအတွက် အကျိုးအမြတ်များစွာ ဖြစ်ထွန်းသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရသ ဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အတွေ့အကြုံကောင်းများအား မြန်မာ့မွေးမြူသူများက လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ကာ အဆိုပါ FTMR Feeding to Enhance Dairy Productivity of Myanmar Smallholder Farms” အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများကို ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်.
“ ဒီစနစ်က ပြည်တွင်းမှာ အသုံးမပြုသေးပါဘူး။ နို့စားနွားမွေးမြူရေး လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ သုံးနေ ကြပြီ၊ ထိုင်းမှာက လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်ကစပြီး ဒါကို သုံးတယ်။ သူတို့အောင်မြင်တယ်။ အောင်မြင်တဲ့ အခါကျ တော့ အဲဒီက အတွေ့အကြုံကို ဒီလာပြန်မျှဝေတာပါ။ ရန်ကုန်မှာကတော့ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာ လုပ်မှာပါ။ မန္တလေးကပွဲကတော့ လောလောဆယ် နေရာမသတ်မှတ်ရသေးဘူး ” ဟု မြန်မာနိုင်ငံ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ် မှ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဒေါက်တာသက်ခိုင်က ဆိုသည်။
ယင်းအလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများကို မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းမှ မွေးမြူရေးသမားများအတွက် ရန်ကုန်မြို့တွင် လာ မည့်မေလ ၂၁ ရက်၌လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်းမှ မွေးမြူသူများအတွက် မန္တလေးမြို့တွင် မေလ ၂၃ ရက်၌လည်းကောင်း ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ နို့စားနွားမွေးမြူရေး၊ နို့ထုတ်လုပ်ရေးအခြေအနေများ နှင့် တိရစ္ဆာန်အစာ အရင်းအမြစ်များ၊ ထိုင်း နိုင်ငံ၏ နို့စားနွားမွေးမြူရေး၊ နို့ထုတ်လုပ်ရေး အခြေအနေများ၊ တိရစ္ဆာန်အစာ အရင်းအမြစ်များနှင့် နို့စားနွား မွေးမြူရေးတွင် ပြောင်းလဲတိုးတက်လာသည့် အစာကျွေးမွေးမှု စနစ်များ၊ TMR နှင့် FTMR တို့ ကျွေးမွေးခြင်းဖြင့် နို့ထုတ်လုပ်မှုနှင့် အရည်အသွေး မြှင့်တင်ခြင်း ၊ TMR ကျွေးမွေးခြင်းဖြင့် မွေးမြူရေးခြံ၏ စီးပွားရေး အကျိုး အမြတ်အပေါ် သက်ရောက်မှုများနှင့် နို့စားနွားမွေးမြူရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် မွေးမြူသူများ အစုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း လုပ်ကိုင်ခြင်း၏ အရေးပါပုံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ နို့စားနွားမွေးမြူရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အစာကြမ်း (forage) စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရေး၏ အရေးပါပုံနှင့် တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုများ စသည့် ခေါင်းစဉ်များကို ဆွေးနွေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို မွေးမြူသူများ (အထူးသဖြင့် နို့စားနွား၊ အသားစားနွား၊ ကျွဲ၊ သိုး၊ ဆိတ် မွေးမြူသူများ) တိရစ္ဆာန်အာဟာရဗေဒ စိတ်ဝင်စားသူများ၊ မွေးမြူရေးပညာရှင်များ၊ တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန်များအားလုံး အခမဲ့ တက်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရန္ကုန်၊ မေ ၄
ကျြဲ၊ နြား၊ သိုး၊ ဆိတ် အစရွိသည့် စာျးမုံျ့ပန်သတ္တဝါမြေျးမူရေး၌ နိုင်ငံတကာတြင် တြယ္က်ယ္စြာ အသုံျးပုနေ ပျြီဖစ်သည့် Fermented Total Mixed Ration ကျြေးမြေျးခင်းနည်းစနစ္နွင့် ပတ်သက်သည့် အလုပ်ရုံဆြေး နြေးပြဲမ်ားကို ရန္ကုန်မြို့နွင့် မန္တေလးမြို့မ်ားတြင် က်င်းပသြားမည်ျဖစ်ကြောင်ျးမန္မာနိုင်ငံ မြေျးမူရေးလုပ်ငန်း အဖြဲ့ခ်ုပ္မွ သိရသည်။
စားမြုံျ့ပန် သတ္တဝါမ်ား မြေျးမူရာတြင် တိရစ္ဆာန်၏ အသက်အရြယ္နွင့် ထုတ္လုပ္မှုအလိုက် လိုအပ်သည့် အာ ဟာရဓာတ္မ်ားကို တြက္ခ်က္ကာ ယင်းလိုအပ္ခ်က္ကျိုပည့္မီစေမည့် အစာဖော်ျမူလာကို တြက္ထုတ်ပြီး အ စာနု၊ အစာကြမ်း အစာအမယ် အားလုံးကို ရောမွှေကာ ထုတ္လုပ္ထားသည့် အစာကို Total Mixed Ration ဟု ခေါ်ဆျိုခင်ျးဖစ္ပါသည်။
ျမန္မာနိုင်ငံ မြေျးမူရေးလုပ်ငန်း အဖြဲ့ခ်ုပ်အေနျဖင့် ထိုင်းနိုင်ငံ မြေျးမူရေး ဖြံ့ဖြိုးတိုးတက္မှု ဦးစီးဌာန၊ ထိုင်းနိုင်ငံ တိရစ္ဆာန် အာဟာရေဗဒ ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ့၊ျမန္မာနိုင်ငံ နို့လုပ်ငန်းအသင်း တို့နွင့် ပူးပေါင်းကာ အဆိုပါ အလုပ် ရုံ ဆြေးနြေးပြဲမ်ာျးပုလုပ်သြားမည်ျဖစ်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံမွ အေသးစား နြားမြေျးမူသူမ်ားအေနျဖင့် လြန္ခဲ့သည့် ၅ နွစ္မွ စတင္ကာ Total Mixed Ration (TMR) ကို အသုံျးပုခဲ့ကြပြီး မြေျးမူသူမ်ားအတြက် အက်ိုးအျမတ္မ်ားစျြာဖစ္ထြန်းသည္ကို တြေ့ရွိခဲ့ရသျဖင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အေတြ့အကြုံကောင်းမ်ားအာျးမန္မာ့မြေျးမူသူမ်ားက လေ့လာနိုင်ရန်အတြက် ရည်ရြယ္ကာ အဆိုပါ FTMR Feeding to Enhance Dairy Productivity of Myanmar Smallholder Farms” အလုပ်ရုံ ဆြေးနြေးပြဲမ်ားကို က်င်းပသြားမည်ျဖစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ ဒီစနစ္ကျပည္တငြ်းမွာ အသုံးမျပုသေးပါဘူး။ နို့စားနြားမြေျးမူရေး လုပ်ငန်း ဖြံ့ဖြိုးတဲ့ နိုင်ငံတြေမွာ သုံးနေ ကြပြီ၊ ထိုင်းမွာက လြန္ခဲ့တဲ့ ငါးနွစ္ကစပြီး ဒါကို သုံးတယ်။ သူတို့အောင်ျမင္တယ်။ အောင်ျမင္တဲ့ အခါက် တော့ အဲဒီက အေတြ့အကြုံကို ဒီလျာပန္မ်ွဝေတာပါ။ ရန္ကုန္မွာကေတာ့ မြေျးမူရေးလုပ်ငန်း အဖြဲ့ခ်ုပ်ရုံးမွာ လုပ္မွာပါ။ မန္တေလးကပြဲကေတာ့ လောလောဆယ် နေရာမသတ္မွတ်ရေသးဘူး ” ဟျုမန္မာနိုင်ငံ မြေျးမူရေး လုပ်ငန်းအဖြဲ့ခ်ုပ် မွ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဒေါက္တာသက္ခိုင္က ဆိုသည်။
ယင်းအလုပ်ရုံ ဆြေးနြေးပြဲမ်ားကျိုမန္မာနိုင်ငံအောက္ပိုင်းမွ မြေျးမူရေးသမားမ်ားအတြက် ရန္ကုန်မြို့တြင် လာ မည့်မေလ ၂၁ ရက်၌လည်းကောင်း၊ျမန္မာနိုင်ငံ အထက္ပိုင်းမွ မြေျးမူသူမ်ားအတြက် မန္တေလးမြို့တြင် မေလ ၂၃ ရက်၌လည်းကောင်း က်င်းပျပုလုပ်သြားမည်ျဖစ်သည်။
ျမန္မာနိုင်ငံ၏ နို့စားနြားမြေျးမူရေး၊ နို့ထုတ္လုပ်ရေးအျေခအေနမ်ား နွင့် တိရစ္ဆာန်အစာ အရင်းအျမစ္မ်ား၊ ထိုင်း နိုင်ငံ၏ နို့စားနြားမြေျးမူရေး၊ နို့ထုတ္လုပ်ရေး အျေခအေနမ်ား၊ တိရစ္ဆာန်အစာ အရင်းအျမစ္မ်ားနွင့် နို့စားနြား မြေျးမူရေးတြင်ျေပာင်းလဲတိုးတက္လာသည့် အစာကျြေးမြေးမှု စနစ္မ်ား၊ TMR နွင့် FTMR တို့ ကျြေးမြေျးခင်ျးဖင့် နို့ထုတ္လုပ္မှုနွင့် အရည်အေသြျးမှင့္တင်ျခင်း ၊ TMR ကျြေးမြေျးခင်ျးဖင့် မြေျးမူရေးခြံ၏ စီးပြားရေး အက်ိုး အျမတ်အေပါ် သက်ရောက္မှုမ်ားနွင့် နို့စားနြားမြေျးမူရေး ဖြံ့ဖြိုးတိုးတက္မှုအတြက် မြေျးမူသူမ်ား အစုအဖြဲ့ ဖြဲ့စည်း လုပ္ကိုင်ျခင်း၏ အေရးပါပုံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ နို့စားနြားမြေျးမူရေး ဖြံ့ဖြိုးတိုးတက္မှုအတြက် အစာကြမ်း (forage) စိုက္ပ်ိုးထုတ္လုပ်ရေး၏ အေရးပါပုံနွင့် တိုးတက်ျေပာင်းလဲမှုမ်ား စသည့် ခေါင်းစဉ္မ်ားကို ဆြေးနြေး သြားမည်ျဖစ်ကြောင်း သိရသည်။
အလုပ်ရုံဆြေးနြေးပြဲကို မြေျးမူသူမ်ား (အထူးသျဖင့် နို့စားနြား၊ အသားစားနြား၊ ကျြဲ၊ သိုး၊ ဆိတ် မြေျးမူသူမ်ား) တိရစ္ဆာန်အာဟာရေဗဒ စိတ်ဝင္စားသူမ်ား၊ မြေျးမူရေးပညာရွင္မ်ား၊ တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန္မ်ားအားလုံး အခမဲ့ တက်ရောက်ဆြေးနြေးနိုင္မည်ျဖစ်ကြောင်း သိရသည်။
My husband and i felt really lucky when John managed to deal with his investigation through your precious recommendations he was given out of your web pages. It's not at all simplistic to just happen to be releasing hints which the others may have been trying to sell. And we also take into account we've got the website owner to be grateful to because of that. The entire explanations you've made, the straightforward site navigation, the friendships you can make it possible to foster - it is all extraordinary, and it's really aiding our son and the family know that the situation is cool, which is extraordinarily essential. Thank you for the whole lot! off white
by huvjeqdzbp@gmail.com at June 08 2019
Thanks so much for providing individuals with remarkably splendid chance to discover important secrets from this website. It is usually so kind and full of amusement for me personally and my office co-workers to visit the blog on the least3times in one week to read through the new tips you have got. And lastly, we're actually satisfied with the striking concepts you serve. Selected4points on this page are surely the very best I've ever had. bape hoodie
by dbdzrtani@gmail.com at June 05 2019
Thanksalot for giving everyone an extremely superb possiblity to discover important secrets from this website. It really is very lovely and also stuffed with fun for me and my office acquaintances to visit your website not less than3times in7days to find out the new guidance you have got. And lastly, I am also actually impressed for the staggering thoughts you give. Some3facts on this page are indeed the finest I've ever had. yeezy boost 350
by ufzhlkpph@gmail.com at May 29 2019
Thank you for all of your effort on this site. Debby really loves getting into internet research and it is obvious why. A number of us notice all about the dynamic form you create reliable steps via this website and in addition welcome participation from website visitors on the point and our favorite princess is withoutadoubt discoveringagreat deal. Enjoy the rest of the year. You have been conductingafabulous job. jordan shoes
by evhubl@gmail.com at May 24 2019
Thanksalot for providing individuals with an extremely spectacular chance to discover important secrets from here. It's always so good plus jam-packed withagreat time for me personally and my office friends to visit your web site at the least3times in7days to read the new secrets you have got. And of course, I am usually motivated with the magnificent guidelines you serve. Certain4points in this post are clearly the very best I've ever had. michael kors handbags
by xcscur@gmail.com at May 20 2019
I truly wanted to sendaremark to thank you for the precious tricks you are posting here. My extensive internet look up has at the end of the day been paid with reasonable knowledge to exchange with my close friends. I would declare that many of us website visitors actually are undeniably endowed to dwell inaremarkable place with very many marvellous individuals with interesting tricks. I feel very grateful to have encountered the website page and look forward to tons of more exciting times reading here. Thanks again for all the details. gucci belt
by gmlrqi@gmail.com at May 15 2019
Thank youalot for providing individuals withavery breathtaking possiblity to read critical reviews from this web site. It can be so useful and full ofalot of fun for me personally and my office mates to visit your site particularly three timesaweek to find out the newest things you will have. Of course, I am usually fascinated for the impressive pointers served by you. Certain 1 facts on this page are easily the most effective we have all had. supreme clothing
by xpyiutmd@gmail.com at May 11 2019
I want to show my thanks to you for bailing me out of this predicament. Just after checking throughout the the web and obtaining opinions which are not beneficial, I thought my life was over. Living minus the approaches to the problems you have fixed asaresult of the article isacritical case, and ones that might have inanegative way damaged my entire career if I had not come across the website. The capability and kindness in taking care of all the details was precious. I am not sure what I would have done if I had not come upon suchathing like this. I'm able to at this time look ahead to my future. Thank you very much for this impressive and effective help. I won't be reluctant to suggest the website to anybody who needs to have support on this problem. bape hoodie [url=http://www.bapehoodie.us]bape hoodie[/url]
by gcfdos@gmail.com at May 07 2019
by U Htin Aung Shein at May 04 2019